ऋण काढेरै भए पनि करोडपति थिएँ तर १० दिनमै रोडमा आएको छु – Sandesh Press
ऋण काढेरै भए पनि करोडपति थिएँ तर १० दिनमै रोडमा आएको छु
June 26, 2021 289
काठमाडौं– गएको बुधबार साँझपख मेलम्चीको बाढीले डुबेको घर हेरेर टोलाइरहेका थिए मेलम्चीका रञ्जितकुमार श्रेष्ठ। रातभरको अनिदोले आँखा राता थिए। पिरले न उनी निदाउन सके, न केही खान नै। १० दिनजति मात्रै भएको उनले घर फिनिसिङ गरेको। चार तलाको घर ठड्याउँदा श्रेष्ठ परिवार दंग थियो। तर, १० दिनमै कत्रो दशा आइलाग्यो !
८५ लाख ऋणमा बनाएको घर मेलम्चीको लेदोमा डुबिगयो। बैंक, साथीभाइ र आफन्तबाट ऋण लिएर घर बनाएका रञ्जितले तीन वटा तलामा होलट–रेस्टुरेन्ट खोलेका थिए र एक तला आफ्नो लागि राखेका थिए । एक तला पूरै डुबेको घरका दुई तला हेर्दै बसेका छन् रञ्जित। ‘मर्नु न बाँच्नु भएको छ। भएभरको ऋण काढेर घरमै लगाएँ, घरै गयो। अब कसरी ऋण तिर्ने? कसरी घरपरिवार पाल्ने?’ उनले खुइया का ढे। मु र्मु रिन्छन् बे लाबेला।
टाउकोमा हात लगाउँछन्, बजार फ न्को मार्छन् र फेरि पुग्छन् आफ्नै घर नजिक । कपडा निकाल्न सकिन्छ कि भनेर घरभित्र पस्न खोजे तर, खुट्टा लेदोमा भासिए। आफैँ डुब्ने खतरा भए पछि फर्किए । घर बनाउन रञ्जितले सिन्धु विकास बैंकबाट ३५ लाख ऋण लिएका छन्। ५० लाख साथीभाइ र आफन्तको छ। महिनाको १ लाख १० हजार त किस्ता नै तिर्नुपर्छ।
‘त्यही घरबाट कमाएर रिन तिरौंला भन्ने थियो। अब कसरी तिर्नु ? मुटु, कलेजो, कि ड्नी सबै अंग बे’चे पनि पुग्दैन,’ श्रेष्ठ बिरिक्तन्छन्। सेतो टायल लगाएर टिलिक्क टल्काएका थिए घर। सबैचिर मार्बलै–मार्बल। कुर्सी सोफा, टेबल लगायत सबै सामानको जो हो गरिसकेका थिए। मंगलबार साँझ खाना खाएर पल्टिएका थिए रञ्जित। मेलम्चीमा पानी बढेको हल्ला चलिरहेको थियो बजारमा। एकै छिनमा सबै घर छोडेर हिँड्न थाले।
रञ्जितकी श्रीमती पनि दुई बच्चा बोकेर निस्किइन्। श्रीमतीले जति कर गरे पनि पति भने बाहिर निस्किन मानेनन् र डराइ डराइ सुते। राति १२ बजेतिर बिउँझिँदा उनले मेलम्ची खोलाको गडगडाहट सुने र बाहिर चिहाए। तर पानी देखिएन। उनी टर्च बालेर हेर्न गए ओहो! बाढी त आफैंलाई निल्छ जस्तो गरी उर्लिएको रहेछ। एकैछिनमा मेलम्चीको पानी उनको घरमा पनि पुग्यो। आँखैअघि उनको घर डुब्यो।
घरबाट निस्किएर रञ्जित श्रीमती र छोराछोरी खोज्न माथि स्कुलतिर लागे। मेलम्चीको नयाँ बजारले नयाँ रुप लिँदै थियो। मंगलबार बिहानमात्रै प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ उठाएर बाटो पिच गरेका थिए । घर फिनिसिङ भएपछि केही नयाँ गर्न रञ्जितले रेस्टुरेन्टको नाम समेत फेरेका थिए। पहिले नेवारी किचेन थियो, पछि होटल नेवाः राखेका थिए। नयाँ साइन बोर्ड बनाउन दिएका थिए।
‘ऋण काढेरै भए पनि करोडपति थिएँ, अब रोडमा आएको छु। मभित्र के गुज्रिरहेको छ, मलाईमात्रै थाहा छ। मनको पीडा शब्दमा भन्न सक्दिनँ,’ रञ्जित भक्कानिन्छन् । मेलम्चीकै होटल व्यावसायी चिरञ्जीवी खड्काले पनि तीन महिना अघिमात्रै १८ लाखमा होटल किनेका थिए।
ऋण काढेको भए पनि कमाउँला र तिरौंला भन्ने आँट थियो। उनी पनि डुबेका छन् ऋणमा। उनलाई पनि ब्याज र किस्ताको पिरलो भएको छ। ७०वर्षे ईश्वर गिरी उर्लिएको मेलम्ची देखेर अचम्मित थिए। यो उमेर हुँदासम्म कहिल्यै मेलम्चीको यो रुप नदेखेको सुनाए । ‘खै किन यसरी सबै सखापै पार्ने गरी बौलाएर आयो थाहा छैन। धेरैको बिल्ली बाठ भयो,’ उनले सुनाए। यो खबर नेपाल समयमा अंगद सिंहले लेख्नुभएको छ ।
Prevअब खाडी देशमा काम गर्न जाने नेपालीहरुको लागि आयो यस्तो नियम, नियम पालना नगरे जान नपाउने
Nextप्रधानको घरमा ५ बर्ष बसेका टेलिभिजन सम्पादक भन्छन् उहाँबाट जातिय विभेद म कल्पना गर्न सक्दिन
यो वर्षको साउनमा शिवको व्रत बस्नेलाई हुनेछ विशेष फलदायी, यी ६ राशिलाई मिल्नेछ शुभ फल
मा-सुले भन्दा तीन गुणा प्रोटिन दिने यी ७ खानेकुराहरु,जुन स्वा’स्थका लागि निकै लाभदायि
बिहानी पख श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा : घट्यो यस्तो अचम्मको घटना . . .